Shir u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo ka furmi doona Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShir u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo ka furmi doona Muqdisho
February 4, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shir u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa la filayaa in asbuucaan gudihiisa uu ka dhaco magaaalada Muqdisho, sida ilo-wareedyo ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa ku sii jeeda Muqdisho si ay uga qeybgalaan shirka oo uu hoggaamin doono Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Shirka ayaa diirada lagu saari doonaa ammaanka dalka, wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, hanaanka doorashada hal qof iyo hal cod, iyo isku dhafka ciidamadda.
Dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa shirar hore ku yeeshay Muqdisho intii uu xafiiska joogay Madaxweyne Farmaajo, oo sideeda bishaan Febaraayo ku beegantahay mudadii uu xafiiska qabtay sanad kahor.
March 2, 2018 Madaxda dalalka ku tabarucay ciidamadda AMISOM oo shir uga furmayo Kampala
Galkayo-(Puntland Mirror) Unidentified gunmen have shot dead the head of Puntland’s ministry of planning in Mudug region, residents said. Resident in Galkayo town who spoke to Puntland Mirror by phone said the incident took place in Garsoor [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa si kumeelgaar ah ula wareegay awooda Puntland kadib markii madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uusan xilligan gudan karin wajibaadkiisa dastuuriga ah maadaaba uu ku mashquulsanyahay ololihiisa [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland ayaa isku diyaarinaya dagaal ka dhan maleeshiyada Al-Shabaab kadib markii ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala gudaha Buuraha Galgala gelinkii hore ee Khamiista. Isaga oo gudaha magaalada Garoowe kula [...]